Misoro yeNhau dzaNhasi, China, Chivabvu 28, 2020
Madzimai matatu eMDC anoti akapambwa akatochwa ari mumaoko emapurisa, akazosungwa zviri pamutemo marimwe zuro, apihwa nedare redzimhosva mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita chiuru chimwe chete chemadhora emuZimbabwe pamunhu, uye anzi azviise kumapurisa kamwe chete pamasvondo maviri ega ega.
Nyanzvi munyaya dzezvemitemo pamwe nekodzero dzevanhu dzozeya zviri kuitika pamadzimai matatu eMDC ari kurapwa ari muhusungwa ari muchipatara chemuHarare umo akachengetedzwa nemaghadhijeri mapfumbamwe pamusoro pezvo paine mapurisa zvakare akavachengetedza.
Vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 hwasvika pazana nemakumi matatu nevaviri, uye vafa nechirwere ichi, vachiri vana munyika yose.
Mapurisa anozara muChinhoyi nemamwe maguta achirambidza vanhu vasina mvumo yekupinda mukati meguta.
Gurukota rezvevashandi, Muzvinafundo Paul Mavima, vanoti hurumende yakagadzirira kuita hurukuro dzeTripartite Negotiating Forum nevashandi svondo rinouya kuitira kuti kuzeyiwe nyaya yemihoro mushure mekukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu nekuda kwekushaya simba kwedhora remunyika.
Muchirongwa cheWomen’s RoundTable na8pm tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeCovid-19.